Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga iyo Taxanaha Mawqifka Halgamaaga
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga iyo Taxanaha Mawqifka Halgamaaga
Barnaamijka AH ee todobaadkan waxaa lagaga hadlayaa arima ay ka mid yihiin ereyada uu gumaysiga kusoo celceliyo ay kamidka yihiin – nabad – horumar – dimoqraadiyad – federal – qawmiyadaha itoobiya waa intaa – reer-hebel iyo reer hebel- ereyadaa oo gumaysi Kal-kaalka la xafidsiiyay ayaynu si taxana ah u lafaguri doonaa anagoo kaga hadli doona siduu u arko halgamaaga JWXO ereyadaa. Waxaan taxanaha barnaamijka inoo bilaaban doona aan cinwaan uga dhignay – Mawqifka Halgamaaga -.
Ereyga Nabad – ayuu gumaysi walba aad ugu soo celceliyaa, ilaa qofka diida gunnimadia ay ugu yeedhaan inuu yahay – Nabad-diid – Nabad sida la ogsoon yahay waxay dhex martaa 2ba qof markay ka heshiiyaan qadiyadii dhexdooda ahayd. Marba haddii labada daraf midkood uu tirsanayo inuu xaq ka maqan yahay, suurta gal ma’aha in laga dalbo nabad isagoon la xaq marin. Waase laga adkaan karaa laguna qasbi karaa inuu ogolaado xaqdaradaa, taasina ma’aha nabad uu qaatay ee waa ogolaansho xaqiisiiyoo la duudsiyay marxaladaa uu taagan yahay.
Barnaamijka iyo Hordhiciisa oo si kooban looga hadlay gunaanadka barnamijkii ku saabsanaa 3exda Facaad ee ku kulmay Halganka JWXO halkan kala socda. Idinkoo talooyinka iyo su’aalaha ku saabsan noogu soo hagaajin doona cinwaankii baraanmijka.